48.5458°N 1.7283°E ﻿ / 48.5458; 1.7283 I Écrosnes dia kaominina ao aminny fivondronani Chartres, ao aminny departemantani Eure-et-Loir, ao aminny faritri Centre-Val de Loire, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 28137. I Annie Cam ...
48.3119°N 1.3261°E ﻿ / 48.3119; 1.3261 I Épeautrolles dia kaominina ao aminny fivondronani Chartres, ao aminny departemantani Eure-et-Loir, ao aminny faritri Centre-Val de Loire, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 28139. I Bruno ...
48.2464°N 4.3153°W ﻿ / 48.2464; -4.3153 I Argol, Finistère dia kaominina ao aminny fivondronani Châteaulin, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri Bretagne, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29001. I Henri Le Pap ...
47.9019°N 3.4389°W ﻿ / 47.9019; -3.4389 I Arzano, Finistère dia kaominina ao aminny fivondronani Quimper, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri Bretagne, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29002. I Marie-Isabelle ...
48.025°N 4.5406°W ﻿ / 48.025; -4.5406 I Audierne dia kaominina ao aminny fivondronani Quimper, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri Bretagne, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29003. I Jaqueline Donval no benny ...
47.9333°N 3.6958°W ﻿ / 47.9333; -3.6958 I Bannalec dia kaominina ao aminny fivondronani Quimper, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri Brittany, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29004. I Yves André no benny tan ...
47.8581°N 3.6033°W ﻿ / 47.8581; -3.6033 I Baye, Finistère dia kaominina ao aminny fivondronani Quimper, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri Brittany, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29005. I Philippe Le Teni ...
48.4050°N 3.7506°W ﻿ / 48.4050; -3.7506 I Berrien, Finistère dia kaominina ao aminny fivondronani Châteaulin, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29007. I Marie-Pierre Coant- ...
48.0761°N 4.5103°W ﻿ / 48.0761; -4.5103 I Beuzec-Cap-Sizun dia kaominina ao aminny fivondronani Quimper, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29008. I Jean Pichon no benny tan ...
48.5308°N 4.1156°W ﻿ / 48.5308; -4.1156 I Bodilis dia kaominina ao aminny fivondronani Morlaix, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29010. I Albert Moysan no benny tanàna man ...
48.4303°N 4.5122°W ﻿ / 48.4303; -4.5122 I Bohars dia kaominina ao aminny fivondronani Brest, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29011. I Armel Gourvil no benny tanàna mandri ...
48.445°N 3.5825°W ﻿ / 48.445; -3.5825 I Bolazec dia kaominina ao aminny fivondronani Châteaulin, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29012. I Jaqueline Pailler no benny tanàn ...
48.3844°N 3.9133°W ﻿ / 48.3844; -3.9133 I Botmeur dia kaominina ao aminny fivondronani Châteaulin, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29013. I Georges Isaac no benny tanàna ...
48.5278°N 3.64°W ﻿ / 48.5278; -3.64 I Botsorhel dia kaominina ao aminny fivondronani Morlaix, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29014. I Monique Quéré no benny tanàna mandr ...
48.5003°N 4.5036°W ﻿ / 48.5003; -4.5036 I Bourg-Blanc dia kaominina ao aminny fivondronani Brest, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29015. I Jean-Paul Berthouloux no benny ...
48.3008°N 3.9542°W ﻿ / 48.3008; -3.9542 I Brasparts dia kaominina ao aminny fivondronani Châteaulin, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29016. I Jean-Pierre Broustal no benn ...
48.3583°N 3.8497°W ﻿ / 48.3583; -3.8497 I Brennilis dia kaominina ao aminny fivondronani Châteaulin, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29018. I Jean-Victor Gruat no benny t ...
48.1028°N 3.9972°W ﻿ / 48.1028; -3.9972 I Briec dia kaominina ao aminny fivondronani Quimper, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri Bretagne, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29020. I Jean-Paul Le Pann no benny ...
48.6653°N 4.3247°W ﻿ / 48.6653; -4.3247 I Brignogan-Plage dia kaominina ao aminny fivondronani Brest, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29021. I Jean-Yves Bodennec no benny ...
48.4789°N 4.7122°W ﻿ / 48.4789; -4.7122 I Brélès dia kaominina ao aminny fivondronani Brest, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29017. I Guy Colin no benny tanàna mandritry ...
47.8775°N 4.1114°W ﻿ / 47.8775; -4.1114 I Bénodet dia kaominina ao aminny fivondronani Quimper, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri Brittany, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29006. I Christian Pennanech no b ...
48.2767°N 4.5956°W ﻿ / 48.2767; -4.5956 I Camaret-sur-Mer dia kaominina ao aminny fivondronani Châteaulin, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri Bretagne, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29022. I Nadine Servan ...
48.6686°N 3.9125°W ﻿ / 48.6686; -3.9125 I Carantec dia kaominina ao aminny fivondronani Morlaix, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri Bretagne, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29023. I Jean-Guy Guéguen no ben ...
48.2783°N 3.5672°W ﻿ / 48.2783; -3.5672 I Carhaix-Plouguer dia kaominina ao aminny fivondronani Châteaulin, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri Bretagne, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29024. I Christian Tr ...
48.1581°N 4.1383°W ﻿ / 48.1581; -4.1383 I Cast, Finistère dia kaominina ao aminny fivondronani Châteaulin, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29025. I Jacques Gouérou no ben ...
48.1975°N 4.0886°W ﻿ / 48.1975; -4.0886 I Châteaulin dia kaominina ao aminny fivondronani Châteaulin, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri Bretagne, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29026. I Gaelle Nicolas no ...
48.1875°N 3.8131°W ﻿ / 48.1875; -3.8131 I Châteauneuf-du-Faou dia kaominina ao aminny fivondronani Châteaulin, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29027. I Christian Ménard n ...
47.7967°N 3.5836°W ﻿ / 47.7967; -3.5836 I Clohars-Carnoet dia kaominina ao aminny fivondronani Quimper, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29031. I Jacques Juloux no benny t ...
47.8986°N 4.0669°W ﻿ / 47.8986; -4.0669 I Clohars-Fouesnant dia kaominina ao aminny fivondronani Quimper, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29032. I Michel Lahuec no benny ...
48.0483°N 4.6461°W ﻿ / 48.0483; -4.6461 I Cléden-Cap-Sizun dia kaominina ao aminny fivondronani Quimper, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29028. I Nadine Kersaudy no benny ...
48.2364°N 3.6672°W ﻿ / 48.2364; -3.6672 I Cléden-Poher dia kaominina ao aminny fivondronani Châteaulin, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29029. I Jacques Quiltu no benny t ...
48.6642°N 4.1008°W ﻿ / 48.6642; -4.1008 I Cléder dia kaominina ao aminny fivondronani Morlaix, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29030. I Gérard Daniélou no benny tanàna ma ...
48.5086°N 4.5408°W ﻿ / 48.5086; -4.5408 I Coat-Méal dia kaominina ao aminny fivondronani Brest, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29035. I Marie-Louise Jaouen no benny tanà ...
48.2858°N 3.7728°W ﻿ / 48.2858; -3.7728 I Collorec dia kaominina ao aminny fivondronani Châteaulin, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29036. I Marie Le Borgne no benny tanà ...
47.8878°N 4.1589°W ﻿ / 47.8878; -4.1589 I Combrit dia kaominina ao aminny fivondronani Quimper, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29037. I Jean-Claude Dupré no benny tanàna ...
48.4142°N 3.9528°W ﻿ / 48.4142; -3.9528 I Commana dia kaominina ao aminny fivondronani Morlaix, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29038. I Marie-Thérèse Lancien no benny ta ...
47.8761°N 3.9178°W ﻿ / 47.8761; -3.9178 I Concarneau dia kaominina ao aminny fivondronani Quimper, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29039. I André Fidelin no benny tanàna ...
48.0506°N 4.425°W ﻿ / 48.0506; -4.425 I Confort-Meilars dia kaominina ao aminny fivondronani Quimper, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29145. I Paul Guéguen no benny tanàn ...
48.0619°N 3.8286°W ﻿ / 48.0619; -3.8286 I Coray dia kaominina ao aminny fivondronani Châteaulin, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29041. I Jean-René Joncour no benny tanàn ...
48.2458°N 4.4875°W ﻿ / 48.2458; -4.4875 I Crozon dia kaominina ao aminny fivondronani Châteaulin, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29042. I Daniel Moysan no benny tanàna m ...
48.3617°N 4.2581°W ﻿ / 48.3617; -4.2581 I Daoulas dia kaominina ao aminny fivondronani Brest, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29043. I Jean-Claude Le Tyrant no benny tanà ...
48.2203°N 4.1639°W ﻿ / 48.2203; -4.1639 I Dinéault dia kaominina ao aminny fivondronani Châteaulin, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29044. I Michel Cadiou no benny tanàna ...
48.3978°N 4.2686°W ﻿ / 48.3978; -4.2686 I Dirinon dia kaominina ao aminny fivondronani Brest, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29045. I Claude Bervas no benny tanàna mandr ...
48.1039°N 3.9758°W ﻿ / 48.1039; -3.9758 I Edern, Finistère dia kaominina ao aminny fivondronani Quimper, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29048. I Jean-Paul Cozien no benn ...
47.9956°N 3.8886°W ﻿ / 47.9956; -3.8886 I Elliant dia kaominina ao aminny fivondronani Quimper, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29049. I François Le Saux no benny tanàna ...
47.9969°N 4.0208°W ﻿ / 47.9969; -4.0208 I Ergué-Gabéric dia kaominina ao aminny fivondronani Quimper, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29051. I Hervé Herry no benny tanàna ...
48.0258°N 4.5614°W ﻿ / 48.0258; -4.5614 I Esquibien dia kaominina ao aminny fivondronani Quimper, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29052. I Didier Guillon no benny tanàna ...
47.8942°N 4.0108°W ﻿ / 47.8942; -4.0108 I Fouesnant dia kaominina ao aminny fivondronani Quimper, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29058. I Roger Le Goff no benny tanàna m ...
48.6019°N 3.7558°W ﻿ / 48.6019; -3.7558 I Garlan dia kaominina ao aminny fivondronani Morlaix, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29059. I Édouard Clech no benny tanàna mand ...
47.9114°N 4.1136°W ﻿ / 47.9114; -4.1136 I Gouesnach dia kaominina ao aminny fivondronani Quimper, ao aminny departemantani Finistère, ao aminny faritri, ao Frantsa. Ny INSEE dia mampiasa ny kaodim-paositra 29060. I Michel Simon no benny tanàna ma ...